Iyo Apple Watch inofanirwa kuve yakakosha chigadzirwa choutano | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inofanira kuve inofanirwa-kuve nehutano chigadzirwa
Isu takaverenga yakawanda nhau nezvekuti iyo Apple Watch yakachengetedza sei hupenyu hwevanhu vazhinji nekuda kwema sensors ayo uye software. Kubva kuvanhu vakaonekwa matambudziko ekoniyoni kune avo vakaponeswa nekuda kweiyo software yekudonha, Apple Watch inofanira kuve yakakosha yehutano mune ramangwana. Mukufunga kwanguIcho chinhu chakakosha kwazvo uye chinopfuura chinongowanikwa chete.
1 Izvo zvakatanga se wachi, ikozvino zvakawanda zvakawanda
2 MuUS, kunyangwe vanachiremba vanoshandisa Apple Watch kuongorora hutano hwevarwere vavo
3 Izvo zvakakosha kuti izvi zvigadziriso muHutano zvinosvika kune vese vashandisi
Izvo zvakatanga se wachi, ikozvino zvakawanda zvakawanda
Pakatangwa iyo Apple Watch, Izvo zvaida kuitirwa mudziyo wekubatsira kune iyo iPhone iyo yatisingakwanise kushandisa nguva yakawandisa tichitarisa pafoni skrini. Nekuda kweizvozvo, makambani mazhinji akatanga zvigadzirwa zvavo pamusika.
Apple yaifanirwa kuzvitsauranisa neimwe nzira kubva kune vamwe. Kune izvi, akasarudza kushandura iyo Apple Watch kuita muchina wese unogona kubatsira mushandisi wayo. Kwete chete kupindura mafoni kana mameseji kana zvisiri na chinangwa chakanyanya kukosha.
Parizvino iyo Apple Watch yakanyanya kuzvimiririra kubva ku iPhone uye haina kurasikirwa nehunhu hwayo, inova yekubatsira mushandisi kuti ave akasununguka zvishoma kubva parunhare. Asi zvave zvakare chinhu chakakosha kuvanhu vazhinji avo vanoda kutarisira hutano hwavo.
Kutenda kumabasa e electrocardiogram kana kudonha kuonekwa, pakati pevamwe, iyo Apple Watch yave mu "inishuwarenzi yeupenyu" kuvanhu vazhinji.
KuWWDC Muvhuro unotevera, tichaona, kana kuti vanodaro. ese mashandiro eiyo WatchOS 7 uye runyerekupe kuti mazhinji matsva anozotenderedza iyo hutsva hutano maficha, sekuonekwa kwekuvhunduka, BP, kana kunyange mukana wekuti utapukirwe neCoronavirus.
MuUS, kunyangwe vanachiremba vanoshandisa Apple Watch kuongorora hutano hwevarwere vavo
Isu tinoziva zvakare kuti Apple Watch chishandiso chiri kushandiswa nevamwe vanachiremba kuongorora mamiriro ehutano evamwe vevarwere vavo. Iyo data inotumirwa online kubva paawa kusvika kuna chiremba uyo ane mukana wekunyatsoongorora.
MuSpain izvi hazvisati zvaitika, asi isu tinogona kuzviwana isu nerwiyo mumazino nekuti isu takakwanisa, zvirinani, izvo iro ECG rinoshanda kana tichigona kuva naro paApple Watch. Basa ratinoziva isu rinoshanda uye iro yakaponesa vanhu uye acharamba achidaro.
Nemwedzi ichangopfuura yedenda repasi rose, takaona kumwe kubvunzana kwekurapa kwakamiswa nekuda kwekushomeka kwevashandi uye kutya. Kuti vanachiremba vagone kure kure kuwana iyi data, ingadai iri budiriro uye inodikanwa kwazvo.
Izvo zvakakosha kuti izvi zvigadziriso muHutano zvinosvika kune vese vashandisi
Pakati penyaya dzese dzakanaka runyerekupe nezve hutsva maficha maficha, isu tinowana iyo iri kunyanya kunetseka. Kune runyerekupe kuti hazvizivikanwe kana hutsva hutsva hunosvika kune wese munhu zvakaenzana kana zvisina kudaro chishandiso chitsva chinodiwa kukwanisa kuzviwana.
Hutano ikodzero yepasirese, unofanirwa kukwanisa kuwana mabasa aya pasirese usingashandise imwe mari. Ehezve, kuitira kuti ushandise mashandiro matsva (kuyera kweropa kuyera, semuenzaniso), kudzoreredza Hardware kunodiwa, rubatsiro runogona kuvhurwa pakutengwa kweiyo nyowani kifaa. Dai wango, kune vanhu vanogona kuzvida yehutano hwake.
Kunyangwe zvikaitika, iyo Apple Watch icho chigadzirwa chishoma "chinorwadza" kubhadhara pane yega yega Hardware, kune ese mashandiro ainayo, kunyanya mumunda wehutano. Izvo hazvifanire kunge zvichitovhiringidza kubhadhara chimwe chinhu chingatibatsire zvakanyanya, kana zvisiri kuudza vanhu vese avo vachiri vapenyu nekuda kwechigadzirwa ichi chakatanga sechinhu chakareruka cheiyo iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inofanira kuve inofanirwa-kuve nehutano chigadzirwa
Apple iri kuvhara zvimwe zvitoro muUS nekuda kwekumuka kwe COVID-19
Unogona kuona "The Banker" yakavhurika kwenguva shoma